Tag: usoro ire ere | Martech Zone
Tag: ahịa usoro
Otutu ndi enyi m bu ndi ahia. N'ikwu eziokwu, anaghị m akwanyere ọrụ ha ùgwù ruo mgbe m malitere azụmaahịa m ma maa ya ahụhụ. Enwere m nnukwu ndị na-ege ntị, mmekọrịta siri ike na ụlọ ọrụ ndị na-asọpụrụ m, na nnukwu ọrụ ha chọrọ. Onweghị nke ahụ metụtara nke abụọ m si n'ọnụ ụzọ gafere ka m nọdụ na nzukọ ahịa! Emeghị m ihe ọ bụla iji dozie onwe m ma n'oge na-adịghị anya achọtara
Ọ dị mkpa ịkwalite atụmanya ịzụ ahịa anyị iji hụ na anyị na-enweta ndị ahịa ziri ezi. Ọ bụrụ na anyị banye ndị ahịa na-ezighi ezi, anyị maara ozugbo n'ihi na arụpụta anyị arụghị ọrụ, mmachi nzute na-abawanye, na nkụda mmụọ na-abawanye na mmekọrịta ahụ. Anyị achọghị nke ahụ. Anyị chọrọ ka ndị ahịa ghọta usoro anyị, jiri mmekọrịta anyị kpọrọ ihe ma hụ nsonaazụ anyị na-enweta ha. N'ehihie a, m ga-akpọ otu enyi na otu onye ọrụ
Ghọta R na CRM
Mọnde, Jenụwarị 28, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anọ m na-agụ ezigbo post na CRM na echere m na enwere nnukwu, nnukwu, oghere na-eme ka ọtụtụ CRM mejuputa… Mmekọrịta. Gịnị bụ mmekọrịta? Mmekọrịta chọrọ njikọ abụọ, ihe anaghị adịkarị CRM. Isi CRM niile dị n'ahịa na-arụ ọrụ dị egwu maka nbudata data - ma ha anaghị eme ihe ọ bụla iji mezue akaghị. Ekwenyere m na nke a bụ isi ihe kpatara ọtụtụ